အိန္ဒြာကျော်ဇင် လက်ထပ်မည့် သတင်း ပရိသတ် က စိတ်ဝင်စားနေ | Freedom News Group
by FNG on July 20, 2010	သရုပ်ဆောင် ပြေတီဦး နှင့် အိန္ဒြာ ကျော်ဇင် တို့ နှစ် ဦး တွဲဖက် သရုပ်ဆောင် ထားသည့် ဗီဒီယို ဇာတ်ကား
ဆယ်စု နှစ် တစ်ခု ကျော်တိုင် မြန်မာ ပရိသတ် တို့ ၏ အသည်းစွဲ မင်းသမီး တစ်လက်ဖြစ်ခဲ့သည့်
အိန္ဒြာကျော်ဇင် နှင့် တက်သစ်စလူကြိုက်များ လာသည့် မင်းသား တစ် လက်ဖြစ်သည့် ပြေတီဦး တို့ 
လက်ထပ်တော့ မည် ဟူ သော သတင်း ထွက်ပေါ်လာမှု ကြောင့်ပရိသတ် က ထိုသတင်း ဟုတ်မှန်မှု
ရှိမရှိ ကို စိတ်ဝင်စားနေကြသည် ဟု ဆိုသည်။
အသက် ၃၂ နှစ် အရွယ်ရှိ မင်းသမီး သည် သူ့ ထက်တစ်နှစ် နီးပါးခန့် ငယ်သည့် မင်းသား တစ်ဦး နှင့် ချစ်သူ
ဖြစ်နေကြသည်ဟု လွန်ခဲ့သည့် နှစ်လ လောက်ကတည်းက ရုပ်ရှင် အသိုင်းအ၀ိုင်း တွင် တိုးတိုးတစ်မျိုး ၊ကျယ်ကျယ် တစ်မျိုးသတင်းထွက်ပေါ်ပြီး နောက် ယခု အချိန် တွင် ဂျာနယ်စာမျက်နှာများ ထက် ပထမဦးဆုံးပါရှိ
အိန္ဒြာကျော်ဇင် ၏ လက်တွဲဖော်ကြင်ရာဖက် မည်သူ ဖြစ်မည်
ကို ခန့် မှန်းသုံးသပ် ထားသောဂျာနယ်များမှာလည်း
ရောင်းကောင်း နေပြီး မင်းသမီး ကလည်း ထိုသတင်းများ အတွက် သူမအားမေးမြန်းမှု များ ကို ဆင်ဝှေ့ ရန် ရှောင် သာ ဖြေကြားခဲ့သည်။
အိန္ဒြာကျော်ဇင် လက်ထပ် မည့် သတင်း ထွက်ပေါ်လာပြီး နောက်
သူမ စာပေ သင်ကြားမှု ပြုခဲ့သည့် ရန်ကုန်မြို့ အထက (၁) ဒဂုံ မှ အထက်တန်းပြ ဆရာမ တစ်ဦးက “အခု က ပြေတီဦး နဲ့ လား
ပထမ ကြားထားတာတစ်ယောက် လို့ ပြောတာပဲ ၊ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒီအရွယ်က တော့ အိမ်ထောင် သားမွေး ပြုသင့် တဲ့ အရွယ်ပဲ ဟု ပြောသည်။
အိန္ဒြာကျော်ဇင် ၏ ဘ၀လက်တွဲဖော်ဖြစ်မည်ဟုသတင်းထွက်
ပေါ်နေသည့် သရုပ်ဆောင် ပြေတီဦး သည် ၂၀၀၈ ခုနှစ် နောက်
ပိုင်းမှ စ၍ မြန်မာ ဗီဒီယို နယ်တွင်း တဟုန် ထိုး အောင်မြင် ခဲ့သည်။
ပြေတီဦး နှင့် ပတ်သက်၍ ၃၅ လမ်း အထက်ဘလောက်ရှိ ဗီဒီယို ထုတ်လုပ်သူ တစ်ဦးက ရိုက်ရက် ရဖို့ တောင်မလွယ် ဘူး ရက်ရဖို့ ဆိုရင် သူ့ ကို ပိုင်တဲ့ လူဆီ အရင်ကပ်ရတယ် ဟု ပြောသည်။
သရုပ်ဆောင် ပြေတီဦး နှင့် အိန္ဒြာ ကျော်ဇင် တို့ နှစ် ဦး တွဲဖက် သရုပ်ဆောင် ထားသည့် ဗီဒီယို ဇာတ်ကား
များမှာပရိသတ် က နှစ်သက်ကြသဖြင့် ပရိုဂျူဆာ နှင့် ဒါရိုက်တာ များ ကလည်း ထိုနှစ်ဦး အတွဲ အား ထုတ်
ဝေချင်ကြသည်။ ဒါရိုက်တာ ကျော်ဇောလင်း ရိုက်ကူးခဲ့သည့် ရင်ဘတ်ချင်း အငြိ ဗီဒီယို ဇာတ်ကားမှာလည်း သူတို့ နှစ်ဦးတွဲ ဇာတ်ကားများ ဉ် လူကြိုက် အများ ဆုံးဖြစ်သည်။
သူတို နှစ်ဦး ၏ ပရိသတ် များ ကလည်း မင်္ဂလာ ရက်မြတ် ကို စောင့် မျှော် နေကြသည် ဟု သိရသည်။
အိန္ဒြာကျော်ဇင် နှင့် နီးစပ် သူ တစ်ဦးက မကြာခင် မင်္ဂလာ ဆောင် မယ် ဟု Freedom News Group
အိန္ဒြာ ကျော်ဇင် နှင့် ပြေတီဦး လက်ထပ်မည် ဆိုသည့်သတင်းမှာ လွန် ခဲ့သည့် ခြောက်လ ကျော်ပြေတီဦး
မွေး နေ့ က တစ်ခါ ထွက်ပေါ်ခဲ့ဖူး သော်လည်း ယခု လောက် ကျယ်ကျယ်ပြန့် ပြန့် မဖြစ်ခဲ့ ချေ ။
အိန္ဒြာ ကျော်ဇင် သည် ရေကူး ၀ါသနာ ပါပြီး ပြေတီးဦး က မူ ဘိလိယက် ထိုး ၀ါသနာ ပါသည် ဟု သိရသည်။
လူမှု မီဒီယာ ကွန်ယက် တွင် သတင်း ကို ဖြန့် ဝေရန်Click to share on LinkedIn (Opens in new window)Share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Pinterest (Opens in new window)Click to email (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to print (Opens in new window)Click to share on Google+ (Opens in new window)Click to share on Tumblr (Opens in new window)Like this:Like Loading...	From: ဖျော်ဖြေရေး, ပြည်တွင်းသတင်း	← အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ ချုပ် ၏ အာဇာနည်နေ့ အထိမ်းအမှတ် လှုပ်ရှားမှု
ဒီတစ်ပတ် သတင်း ဓာတ်ပုံ →
awwww..that’s so nice!!! my favorite actress is getting married!
December 21, 2010	ခင်မင်လေးစားသူ	#
အရမ်းရမ်းကိုဝမ်းသာပါတယ်၊ နှစ်ယောက်စလုံးကို သဘောကျတယ်၊ အရမ်းလမ်းလိုက်ဖက်ပါတယ်၊ သူများတွေဘာတွေပဲပြောနေပါစေ၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် နှစ်ယောက်သဘောတူကြည်ဖြူရင်ပြီးတာပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လား၊ စိတ်ဓာတ်မကျနဲ့နော်။ အိုအောင်မင်းအောင်ပေါင်းကျရပါစေ။
December 21, 2010	jannifer	#
သူတို့ချစ်လို့ သူတို့ယူကြတာ ဘယ်သူကိုထိပါးနေလို့လဲ မသိဘူး
December 20, 2010	bikurisusi	#
Congratulation to PYAE TEE OO and EINDRA KYAW ZIN.
December 11, 2010	လီဟောင် အာခါလေးပါ	#
ဘုရားသခင်ဟာ ကမ္ဘာလူသားကို ဖန်ဆင်းခဲ့တာဟာ
လူသားအရောကဆီတိုင်းမှာ လည်း ကိုယ်ပိုင် ရွေးချယ်ခွင့်ပေးထားပါတယ်..
ကျွန်တော်ဆက်သွယ်ချင်တဲ့ ညီအစ်ကို မောင်နှမများကို လာလည်လို့ရပါတယ်
December 11, 2010	ူလီဟောင်	#
စဉ်စီ စရာရှိတာကို အမြန်ဆုံးပြင်ဆင်ပေတော့ မင်းသားနဲ့ မင်းသမီးရာ
December 11, 2010	နွေးနွေး(လားရှိုး)	#
December 7, 2010	မြတ်နိူး	#
November 24, 2010	kae kaeh	#
ကိုပြေတီဦးရေ မအူဝဲနဲ့ယူလို့ကတော့ ကိုပြေတီဦးကမတွေးဝံ့စရာပဲ…. ကိုပြေတီဦးရယ်
October 31, 2010	haymarn	#
October 11, 2010	မိုးစက်နိုင်	#
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကောင်းပါတယ်… ဘဝ ဆိုတာ တယောက်ထဲ ဖြတ်သန်းဖို့ မလွယ်ဘူးလေ
အနှောင်အဖွဲ့လို့ လူ တချို့က ပြောကြပေမယ့် အဲ့ဒီ အနှောင်အဖွဲ့တွေက ဘယ်သူတွေ ရုန်းထွက်နိုင်ကြလို့လဲ…
ဘယ်သူတွေ ဘာပဲ လုပ် လုပ် မဝေဖန်ပါဘူး…. ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ လူ တိုင်းဟာ ကိုယ် ယုံကြည်တဲ့ လမ်းပေါ် ကိုယ် လျှေက်နေကြတာပါ….
September 21, 2010	စုစု	#
အော်တော်တော်လေး အကုသိုလ်ပွားကြပါလား………..။ သူတို့ဘာသာ သူတို့ချစ်လို့ ယူကြတာကို မကောင်းမြင်ဝါဒနဲ့ လိုက်ဖျက်ဆီးနေကြတယ်…………။ နင်တို့ရော အကုန်လုံး အပြစ်ကင်းကြလို့လား………..။ အားလုံးက သေရင် ပုပ်သွားမယ့်သူတွေချည်းပဲ………….။ ကံအကြောင်းတရားဆိုတာရှိတယ်………..။ နင်တို့အဲဒီလိုတွေရေးပြီး မန့်ပေးထားတာတွေ ငါဖတ်ရတော့ ကွန်ပျူတာသမားတွေရဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေ ဟိုးအောက်ဆုံးရောက်ကုန်ပြီလားလို့ စိတ်ကုန်မိတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်လဲ ပြန်ကြည့်ကြပါအုံးဟာ သူများကို မဝေဖန်ခင်………။ သူတို့ဘာသာ ယူယူ မယူယူ နင်တို့သာ အမဲစက်မစွန်းအောင် နေကြပါ။
September 18, 2010	ရဲ၇င့် 	#
January 25, 2011	ဘုန်းမြတ်သခင်	#
September 7, 2010	aung phone myat	#
အမယ်လေးပြေတီဦးရေ…………တခြားတယောက်ဆို ဟုတ်ဦးမှာ။အူဝဲနဲ.ယူရင် နင်စန်းကျတော.မှာပေါ. ငတုံးရာ။ဒီနေရာရောက်အောင်ဘယ်လို ကြိုးစားခဲ.လဲဆိုတာမေ့ ပြီပေါ.။အူဝဲက စန်းကျနေပြီ။2010ပြီးရင် သူကျပြီ။မင်းသားတိုင်းနဲ. သတင်းထွက်တဲ.သူမလေးကိုမှ သဘောကျရလား၊?ငတုံး။နင်ပါ စန်းကျချင်လား။မေ၇းမကောင်းလို.သာရေးလိုက်ရတာ။မယူနဲ.။မှားမယ်။
September 7, 2010	ပွင့်	#
ရေးတဲ့သူက ဘာလို့အမှားကြီးရေးထားရတာလဲ။ ပြေတီဦးနဲ့မအူဝဲ တွဲပြီးရိုက်ရင် ဘယ်သူမှမကြိုက်ကြပါဘူး။ သက်မွန်မြင့် နဲ့ တွဲရိုက်မှ အားပေးတာ။ သူတို့နှစ်ယောက်ပဲလိုက်တာပါ။ ဒါနဲ့ ပြေတီဦးက အမှန်ကိုမြင်နိုင်စွမ်းမရှိဘူးနော်။ သူမို့လို့ အူဝဲ နဲ့ သတင်းအထွက်ခံတယ်။ အူဝဲ နဲ့ ပြေတီဦး သတင်းထွက်တဲ့ အတိုင်းအမှန်ဆိုရင်တော့ ပြေတီဦးက တော်တော်သနားစရာကောင်းတယ်။ yanlay ပြောသလိုပဲ ပြေတီဦး အလိမ်မခံရပါစေနဲ့။ ဒါနဲ့ တစ်ခုသတိပေးမယ်။ သူသာ အူဝဲနဲ့ ယူလိုက် ရင် စန်း ပိတ်သွားလိမ့်မယ်။
August 22, 2010	yuyamyatnoe	#
August 18, 2010	yanlay	#
ပြေတီဦး ကရောဦးနှောက်မရှိဘူးလား။ရှိတော့ရှိမှာပါ။သူ့အကြောင်းတော့သိမှာပါ။ခောတ်တော့မကုန်သေးပါဘူး။အပျိုကြီးနဲ့ညားရမယ့် ကိုပြေကြီးအတွက် ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် မလိမ်ရမနေနိုင်ပေါင် ဇာတ်ကားထဲကလိုမလိမ်မခံရပါစေနဲ့။ ဒါပေမယ့်ပြောမယ်နော်ခုခေတ်က ဂျောက်ဂျက်သီချင်းလိုပါပဲ အမှန်လေးတွေ ပဲများပါတယ်။မထူးစိတ်ပဲမွေးလိုက်ပါတော့နော်။ေ၇တွေတောင်မှတွင်းဟောင်းမ
August 15, 2010	a	#
မြန်မာတွေဖြစ်ပြီး ကဲ့ရဲ့သံ ဝေဖန်သံ ထူလိုက်တာဗျာ။ သူတို့ဘယ်လို စီးပွားလုပ်လုပ် ဖျော်ဖြေတယ်လို့ သဘောထားပြီး ပြည်သူချစ်သော အနုပညာရှင်အဖြစ် တွေးကြစမ်းပါ။ ပြောပုံဆိုပုံတွေကြည့်တာနဲ့ ရုပ်ရည်တွေမြင်ယောင်မိတယ် မစ္ဆေယျတွေ။
August 11, 2010	ုကြယ်စင်	#
ဘာဘူ သီချင်းလိုဘဲ ကောင်းပါတယ် ကောင်းပါတယ်
August 6, 2010	ကံ	#
August 3, 2010	minthar	#
ပြေတီဦး ရော အိန္ဒြာကျော်ဇင် ရော နှစ်ယောက်စလုံးက ခောတ်ကုန်သွားပါပြီ။
July 31, 2010	thitsar	#
တောပုံ မျက်နှာရူး အိုးမဲ ငပေါ ကလေ
July 30, 2010	thitsar	#
အိန္ဒြာ ကျော်ဇင် ကလည်းဒီ ရုပ်ကိုများ
July 30, 2010	ဆူသခင်	#
August 10, 2010	ဆူသခင်	#
August 10, 2010	Taw Win	#
အိန္ဒြာ ကျော်ဇင်ရည်းစားဘယ်နှစ်ယောက်ထားဖူးလဲဆိုတာဘယ်သူသိလဲ ဘာမဟုတ်တဲ့ဟာကိုသွားပြီးစိတ်ဝင်စားနေတယ် အခုကျွန်တော်မေးတဲ့မေးခွန်းကစိတ်ဝင်စားဖို့ အကောင်းဆုံးဘဲ
July 30, 2010	တုတ်ကြီး	#
အိန်ဒါကျော်ဇင် လင်ရတော့မှာမို့ ပျော်နေပီ ..
ပြေတီဦးကလည်း အပျိူကြီးနဲ့မှ ကံပါတယ် .. လုပ်ထားပေါ့ကွာ ..
ငါ့သူငယ်ချင်း မိပြား ဗေလုဝနဲ့ညားမှ မင်းတို့ကို ကြွားပြမယ်. . ငါ့နာမည် .. ငပေါ
July 28, 2010	komm1973	#
ပြေတီဦး ရဲ့ ငယ်နံမည်သိလား
July 25, 2010	Master	#
Whatawoman’s name! Stupid !
July 22, 2010	အိလေး	#
July 21, 2010	ဖိုးဝ	#
ပြေတီဦး ဆိုတာ မိန်းမထင်နေတာ ..
ဟီး .. တော်တော် တောကျတဲ့ ငါပါ တကား …
July 20, 2010	မအေး	#
ဗီဒီယို ရိုက်ဖို့ ပြေတီဦး ကို ငှားရင် သူပါ တွဲငှားရတယ် ..ပြေတီဦး က ခောတ်ဖြစ်နေတော့ သူက အပိုင်လုပ်လိုက်တာပေါ့
July 20, 2010	Comments are closed.
Total Visitors:Since 16 December 2008	10,726,543 hits